Aaway ilaah , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxay ka badbaaday dabkii Dagaalkii Kacaanka waxayna aragtay magaalada New York oo u kacaya magaalada ugu weyn adduunka - kaniisad yar oo la yiraahdo St. Paul Chapel. Waxay ku taalaa qaybta koonfureed ee Manhattan oo ku wareegsan dhismayaal dhaadheer. Waxa kale oo lagu yaqaan magaca "Bawdada yar ee Mawliidka ah". Kaniisadda yar ee qabanaysa]. Waxay heshay naanaystaan ​​maxaa yeelay waxay ahayd mid aan waxyeelloobin markii tagga mataanaha uu duntay Sebtember 11, 2001, in kasta oo fogaanku ka yaraaday 100 mitir.
Isla markii uu dhacay weerarkii argagixiso ee Sebtember 11, St. Paul wuxuu u adeegsaday xarun deg-deg ah oo shaqaalaha gurmadka iyo meesha lagala xiriiro qaraabada raadinaya. Toddobaadyo badan, kumanaan mutadawiciin ah oo ka kala yimid diimo kala duwan ayaa yimid meeshan, iyagoo aad u doonaya inay ka wada shaqeeyaan sidii ay ula tacaali lahaayeen musiibada. Kaniisadaha St. Paul waxay keeneen cuno kulul waxayna ka caawiyeen nadiifinta. Waxay tacsi u direen dadkii ay ka dhinteen saaxiibbadood iyo eheladoodii.
Waqtiyada cabsi weyn iyo baahi aad u weyn waxaan ku weydiin karnaa su'aasha: "xaggee Ilaah?" Waxaan u malaynayaa in kaniisadda yar ay na siin karto tilmaan qayb ka mid ah jawaabta. Annagu waan hubnaa. Xataa dooxada dhimashada gudcurka, Ilaah baa inala jira. Masiixu laftiisu nafteenuu isku dayay, wuxuu inaga mid noqday, nal iftiimiya gudcurkeenna. Isaga wuu la xanuunsaday, wadnuhuna wuu jabay markii qalbiyadeenu jabeen oo waxaa na siiya raaxo iyo bogsanaan xagga ruuxdiisa. Xitaa waqtiyada naxdinta leh, Eebbe wuu inala jiraa wuuna u shaqeeyaa badbaadada.
Kaniisadda yar ee la qabtay waxay sii wadi doontaa inay ina xasuusiso in xitaa waqtiyada ugu baahi badan, Eebbe aad ugu dhow yahay - isaga rajo ku jiro, xagga Rabbigeenna Ciise. Kaniisadda guud ahaan waa marag u tahay tan waana inay ina xasuusisaa in Ilaah uusan u oggolaan wax kasta oo ka dhaca noloshaan in laga cafiyo madaxfurashadiisa wadarta markii wakhtigu yimaado. Waxaan u xusnaa kuwa naftooda ku waayey Sebtember 11-keedii. Waxaan ilaahay ka baryayaa inaan dhamaanteen ogaanno inuu Sayidkeennu jiray oo uu la jiro oo markasta nala jiri doono.